IWindows ilula kakhulu, kepha i-GNU / Linux nayo | Kusuka kuLinux
IWindows ilula kakhulu, kepha i-GNU / Linux nayo
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux, Okunye
bekade ngi kufundwa amazwana Kumfundi ogama lakhe lesidlaliso elithi "Umgibeli" alibeke emizuzwini embalwa edlule, futhi ngicaphuna:
IWindows ingahlanjalazwa ngezinto eziningi, kepha ilula, kulula ukuyisebenzisa kusuka ekuqaleni, kungakhathalekile ulwazi umuntu analo noma ukungabi nalo.
Akuyona inhloso yami ukuhoxisa ilungelo lokuba nalowo mbono, kodwa nakanjani angilihlanganyeli futhi ngichaze ukuthi kungani.
Ukukhululeka kwe- Isistimu yokusebenza bathembele ngokwengxenye kumkhuba womsebenzisi wokusebenzisana nayo. Uma ingane, intsha noma umuntu omdala ongakaze athinte ikhompyutha, hlala naye phambi kwanoma iyiphi Ukusatshalaliswa de I-GNU / Linux noma yiluphi uhlobo lwe Windows, ngeke wazi ukuthi wenzeni noma ngabe uzama kanzima kangakanani.
Uma yona leyo ngane, umuntu omusha noma umuntu omdala, eqhubeka nokuhlala phambi kwekhompyutha efanayo, uthola abantu abamfundisa izinto eziyisisekelo njengokusebenzisa i-file explorer, i-office suite, ufunda ukungena kwi-Intanethi nokuxazulula ukungabaza kwakhe, kancane kancane Isistimu yokusebenza oyisebenzisayo kuyajwayeleka, kube lula futhi kunembile.
Ake sithi isibonelo sethu siqale Windows. Ezinyangeni ezinhlanu kamuva, ngemuva kokufunda ukusebenza naye I-Windows Explorer, Internet Explorer nezinye izinhlelo zokusebenza ezihlanganiswe kudeskithophu yalokho Isistimu yokusebenza, kuzozwakala kuxaka kakhulu uma okwamanje ushintsha ikhompyutha wafaka Ubuntu, Fedora, Debian noma yikuphi okunye ukusatshalaliswa.
Ngokuyinhloko ingakukhombisa ukuthi imenyu ikuphi KDE ngokwesibonelo, noma umsebenzisi uqobo angabona ukufana ne- Windows Vista o Windows 7, kodwa uma ngivula I-Dolphin, ngokwazi kwami (noma ukhonjiswe) ukuthi lingenza izinto ezifanayo "noma ngaphezulu" kunange- ukuhlolaKuzozizwa ungakhululekile, kuxakile, okungenani ekuqaleni. Futhi kwenzeka okufanayo nangemuva.
Akekho ongangitshela ukuthi lo mfana ongakaze asebenzise ikhompyutha, ngenkathi efaka Windows uzokwazi ukuthi ungahlukanisa kanjani i-hard drive. Kepha akumele sifike odabeni lobuchwepheshe olunjalo, kunzima kakhulu kumngani wethu ongenalwazi ukuthi angazi kanjani ukumisa Izintandokazi ze-Internet Explorer.
Kungakho ngingahlanganyeli nenqubo yokuthi Windows kulula futhi enembile futhi I-GNU / Linux cha. Zombili zinendlela ngandlela thile Ukusekela nosizo, Imiphakathi, I, Iziteshi ze-IRC, okungukuthi, izindawo zokondla, ukwazisa nokufunda.
Kodwa-ke, kunomehluko omncane. Ngikusho njengomsebenzisi engangivela kuye Windows iminyaka engaphezu kwengu-5, futhi njengomsebenzisi engivela kuye I-GNU / Linux ezingaphezu kuka-4 Uma usufunde ukusebenza I-GNU / Linux, ukuthi ufunde ukuthi ikhambi lezinkinga zakho lingatholakala kufayela le- Amalogi Esistimu noma ukuguqula ifayela lokumiswa; uma usufunde ukuqonda ukuthi ngokufunda okuncane ungaxazulula ukungabaza kwakho okuningi, lapho-ke kuba nzima kakhulu ukusebenza nento elula ngangokunokwenzeka (noma bathi kunjalo) Microsoft Windows.
Uma ngihlala phambi kweWindows XP, noma enye inguqulo, ngizizwa ngiboshiwe. Akungisizi ukuthi ngemuva kwephutha kuvele iwindi elincane lithi:
Thumela iphutha 0x00120YI00123 kwaMicrosoft Support
Ngoba lokho akuyixazululi inkinga yami esheshayo. Ngoba lokho akusho ukuthi iyini inkinga yami yangempela. Futhi leso ngesinye sezizathu esenza ngisebenzise (futhi ngizosebenzisa) I-GNU / Linux, ngoba ezimweni eziningi, ngiyazi ukuthi kufanele ngibheke kuphi ukuthola isixazululo sephutha, inkinga, ukwehluleka noma yini ekhona.
Ngibuyela ekuqaleni, usho lokho IWindows ilula kuyiphutha. Ukusho lokho I-GNU / Linux inzima kuyiphutha. Ubunzima bunikezwa ngokwamandla umuntu ngamunye okufanele akwazi ukuxazulula izinto ezithile ezimeni ezithile. Kusemandleni alowo nalowo uma kukhulunywa ngokufunda nokuzithuthukisa. Kungokungazi ukuthi sibhekene nani nokuthi into ngayinye isebenza kanjani. Ngamafuphi, ubunzima buphakathi kwethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » IWindows ilula kakhulu, kepha i-GNU / Linux nayo
Amazwana ayi-42, shiya okwakho
Angikaze ngisebenzise i-MS WOS iminyaka emi-2 manje ... nansi indlela i-Alcoholics Anonymous okufanele isinike ngayo izindondo.
Lapho manje bengicela ukuthi ngifake kabusha noma ngilungise ikhompyutha, ngibeka Ubuntu - kulula kakhulu ukuba bakuqonde -
Faka i-freeciv kumawindi ngokwesibonelo?
1.- Sesha i-freeciv ku-google
3.- nikeza i-exe
2.- sesha i-freeciv
3.- chofoza ukufaka
sudo apt-get ukufaka i-freeciv
funda i- "sudo apt-get install" - futhi mhlawumbe omunye angenza iskripthi sokuthi "afake iphakethe" lapho kufanele ubeke khona igama.
Mayelana nokufaka lonke uhlelo NGOKUSEBENZA NOKULAWULA
I-MS WOS: indlela elula
1.- Iya kwabayisishiyagalolunye ukhethe izinhlelo bese ufaka
2.- iya kuwebhusayithi ngayinye, landa abashayeli bamuva bese ufaka
3.- bhalisela kuthebhu lewebhu elizokwazisa ngezibuyekezo - HHAYI NGOKUZENZAKALELAYO - zabashayeli
Faka ne-voila, ngamashayeli nezinhlelo obekuzodingeka uzilande kusuka kwayisishiyagalolunye.
2.- Uma ufuna ukusebenzisa abalawuli abaphathelene, ukuchofoza kabili
3.- Ivuselelwa KUPHELA, kahle ikubuza futhi icele iphasiwedi yakho
Noma ngubani kulula ukusebenzisa i-Ubuntu kune-MS WOS, nginike amakilasi okuthi ungayisebenzisa kanjani i-MS WOS, ekugcineni, "njengesipho" ngizokufundisa iLinux abakushoyo kunzima ...
1.- funa i-wubi
3.- landela imiyalo
5.- Sebenzisa i-Libreoffice ukwenza izivivinyo ze-MSO futhi uma unanoma yimiphi imibuzo, buza
6.- Ngiyaphuma ngiyobhema ugwayi, ayikho IMIBUZO
Ngiyaphuma ngiyobhema ugwayi
Kuthiwani uma uyeka ukubhema?
Uma ungaphuthelwa yiphutha lesipelingi (njengami), bekufanele uphuthelwe imininingwane emincane evezwe ngokubhuqa okuthile, hehe heh.
Ngihlala ngiqhathanisa, iWindows iyimoto enebhokisi elizenzekelayo kanti iLinux inye enebhokisi elenziwa ngesandla, okokuqala ngizwa ukuthi iyangilawula kanti okwesibili ngiyayilawula.
Kwenzeka into efanayo kimi, uma manje ngisebenzisa ikhompyutha ye-Windows ngizizwa ngingajwayelekile, njengomuntu ongenamsebenzi ongazi ukuthi enzeni ngayo
Ngicabanga ukuthi "Umgibeli" akalungile.
Ake sibheke leli cala elilandelayo:
Faka i-OS kudeskithophu eyakhiwe wedwa noma uthenge ilaptop ngaphandle kohlelo olusebenzayo.
Ake sibheke izinyathelo zokufaka iWindows nezinyathelo zokufaka ukusatshalaliswa okusebenziseka kalula kweGNU / Linux.
Ukufakwa kweWindows (Leli cala lihlanganisa inani elikhulu labasebenzisi, noma iningi)
- Esigabeni esithile senqubo yokufaka kufanele ubatshele ukuthi umkhiqizo sizowusebenzisa kamuva (ngoba vele asinayo ilayisense, angiphindi kubo bonke ngoba kunabantu abathenga amalayisense: P)
- Uma ukufakwa sekuqediwe, kufanele ubheke ama-driver wezinto ngoba iWindows ayiziboni zonke izingxenyekazi zekhompiyutha futhi uma kunjalo, abashayeli bangaphakathi beWindows bayashiya kakhulu, ikakhulukazi ngabashayeli bevidiyo.
- Ngemuva kwalokho kufanele uthole isilayishi esisebenzayo, njenge- "Windows Loader by Daz".
- Kwenziwe lokhu nje! singabuyekeza uhlelo.
- Kufanele uthole i-antivirus futhi uyiqhekeze noma usebenzise i-antivirus yamahhala.
- Okufanayo nge-Spyware
- Futhi ne-anti-rootkit (:
- Thola, ufake futhi uqhekeke ihhovisi elisemsebenzini. Ngoba abazi ukuthi kunezinye izindlela ezimahhala nezinhle kakhulu.
- Kufanele ufake ama-codec ukudlala umculo nevidiyo
- Faka abadlali abafanelekile ngokwashiwo ephuzwini elidlule noma sebenzisa iWindows Media Player kukho konke.
- Faka izinhlelo zokuthumela imiyalezo njenge-Windows Live Messenger noma i-Yahoo, kuya ngokuthi usebenzisa ini
- Faka isiphequluli uma ungathandi i-Internet Explorer
- Faka ama-compressors wefayela / ama-decompressors (WinRAR) bese uwagenca, kukhona akhululekile futhi, kepha uma ufuna ukusebenzisa i-algorithm ye- "RAR Lab", kufanele ukhokhe.
- Faka isibhengezo sediski njengoNero kanye nokuqhekeka kwaso noma usebenzise enye indlela yamahhala enezinombolo zeWindows kodwa abantu abaningi bathi: "Ngifuna ukushisa, ikuphi iNero?"
Ngalokho besizobe sesivele siyifakile i-Desktop / Laptop yethu entsha eza ngaphandle kwe-Windows OS eyisisekelo futhi esebenzayo.
ake sibheke elinye icala
Ukufaka i-GNU / Linux Plus User-Frienldy distro
- Sifaka idiski
- Sicindezela inkinobho ngokulandelayo, ngokulandelayo, ngokulandelayo ... (yebo, ukufakwa kwamawindi) kuze kuphele inqubo yokufaka.
- faka abashayeli (kusuka kuhlu olukhonjiswe uhlelo uqobo), uma ngabe i-hardware yakho ingaziwa yi-kernel.
Njengoba ukwazi ukubona, yonke isoftware okumele ifakwe kuWindows iza ifakiwe kulezi distros ezisebenziseka kalula.
Ah! Ngikhohliwe ... Uma udinga isoftware eyengeziwe kukhona iwindi elikukhombisa uhlu olukhulu lwesoftware ongayifaka ngokumane uyikhethe ohlwini bese uchofoza inkinobho yokufaka, ngaphandle kwemifantu noma yini.
Njengoba ngiyibona, iWindows inzima kakhulu.
Lokho kungaba umnikelo wami.
Ngiyavumelana ne-elav, konke kuncike kulokho esikujwayele, kungithathe amahora ama-4 noma ama-5 ukufaka iWindows ngayo yonke leyo bhetri yesoftware eyengeziwe okufanele ifakwe, hhayi nge-GNU / Linux.
Ukunqoba akunzima, kungokuhweba kuphela.
Ngemuva kokufakwa osho nge-Win,
Kuthatha isikhathi esingakanani? Ubuncane bamahora amabili kuya kwamathathu lilinye.
Ukubheka uhlelo, ukululanda, ubone ukuthi luyasebenza, faka okhiye, uqhekeze.
I-Antivirus ibeka isikhathi, ifuna okhiye, njll.
Abashayeli babeka isikhathi esiningi, UMA UNGENABO OKUQALA
Ku-Linux (Ubuntu) ukufakwa kuthatha okungenani ama-20 kuye kwangama-30 min
Uma kwenzeka ufuna izinhlelo ku-Ubuntu Center eyodwa uzozithola. Uma kungenjalo.
E-Arch kungukubona i-Wiki kuphela futhi kulula lokho.
NjengoWin, iLinux, iMac, i-Unix. Kungaba lula.
Ngokubona ukuthi uWin uthengiswa kakhulu, bayayifundisa ezikoleni bese belahla abanye.
Uma befundisa iLinux, Mac, Unix. Kungafana noma kube lula kune-Win.
Ayikho i-OS engcono kunenye.
Ukungafani kwabo kubalulekile emkhakheni wabo.
Ku-linux ungadlala amaGiya Wempi njenge-pacman.
Uyazi ukuthi yini i-OS esebenzisa i-Xbox ??? Uyazi ukuthi yini i-OS esebenzisa i-PS3 ???
Umsebenzi wesikole 😀
Imizuzu engama-20? Nah ndoda, Ubuntu Natty ungifakile NGEMPELA imizuzu engu-7, emangalisayo haha ​​😀
KuNkulunkulu makube yinkazimulo, nakithi iLuxux…. Ngisanda kufaka i-LMDE ku-pc yami emsebenzini ngiyasangana, noma ngabe angazi kancane ngalokhu, ngiyayithanda indlela i-pc yami ehamba ngayo.
Ngeshwa angikwazi ukuyifaka ekhaya ngoba anginayo i-intanethi futhi mhlawumbe ukungazi kimi, kepha i-linux incike kakhulu ku-inthanethi.
noma kunjalo ngijabule, manje sengizothola indlela yokudlala okuwukuphela komdlalo lapho ngilahlekelwa yisikhathi sami seligi yezinganekwane….
Ngiyabonga bafana… ikakhulukazi uGaara ongisizile ngemibono yakhe… ..
hehe ... ngikushiya nesixazululo sokufaka i-LMDE ekhaya ngaphandle kwe-inthanethi 😉
Kuyintokozo ukukusiza umngani 😀
Woza, i-LoL isebenza kabi uma uyiqamba nge-Linux, sengivele ngiyizamile futhi wonke umuntu uyafana. Kungcono ube nokuhlukaniswa okuncane kwalokhu kucacisiwe. i-xD
Angikwazi ukufaka ukwahlukaniswa kwedatha kwami, lokhu kwahlukaniswa yi-NTFS futhi ku-GParted kungitshela ukuthi le ngxenye ayaziwa.
Noma yisiphi isiqondiso?
Bheka ukuthi ngabe unamaphakeji afakiwe yini: ntfs-3g y intuthuko
lapho ngifaka i-Ntfsprogs iyikhipha i-Ntfs-3g…. Ngiyifakile i-Ntfs-3g manje engingazi ukuthi ngiza kanjani kuyo….
I-NTFS, ngalokho ukusho konke, isebenza kuphela kwiWindows
Ayikhethi kuphela, ingafundwa futhi iguqulwe ngaphandle kwenkinga ku-OS njenge-GNU / Linux
Ah kahle impela ngikhohliwe nge-super Ubuntu ekwaziyo ukwenza imali kanye nalezo zithithi zokuguga okudingayo iJAJAJAJAJA
Hhayi-ke, wonke umuntu ulibekile iphuzu lakhe futhi manje ngiza * ne-pose yobuqhawe ukubeka amakhadi ami etafuleni.
Bonke banikeze izinkulumo ezibabazekayo, ezinhle nezichazayo kodwa bayaphuthelwa ukuhlaziya komlingiswa. Ngiyifingqa ngokuthile okulula njengokuthi "ama-paradigms" kanye nokufundisa okungajwayelekile nokukhipha amakhompyutha. Ake sibhekane nakho. Bafundisani ama-computer amancane? "Le yi-CPU, lokhu kuqapha, leli yihhovisi le-MS futhi lisetshenziswa kanjena (uhhafu)" -professor kanye ne-linux- * ebusweni bendelelo engapheli * Ngaphandle kwekilasi!
Abafundisi nje noma yini ejwayelekile, bayapholisa futhi bavalele abafundi ohlelweni futhi babenzele i-tunnel vision syndrome. Ekugcineni, i-paradigm idale futhi yabonisa inkinobho: faka umfana oneminyaka engu-14 ubudala i-libreoffice (isikhombimsebenzisi esifana ne-office ye-MS) futhi uzokhipha izinwele zakhe futhi akumemeze ukuthi lelo suite liyi-shit! (ngikholwe, okwami).
Ngiyavuma ngokuqinile, ngoba akunzima ukuthi izingane zifunde futhi uma kukhulunywa ngekhompiyutha kakhulu, umfowethu oneminyaka engu-9 ulazi kahle i-LMDE, ngakho-ke inkinga akuyona ukuthi i-GNU / Linux kunzima ukuyifunda Uma kungenjalo, njengoba usho, kulapho bebeka khona noma yisiphi isilima ukuze babafundise ukusebenzisa uhlelo olukubophezelayo, olukulawulayo nolukukhaphele.
Yebo, ngo-14 ngisebenzise i-Linux ngokuphelele, kepha awukho umthetho ngaphandle kokukhetha
Okuhlangenwe nakho komsebenzi, kusukela eminyakeni engaba ngu-4 eyedlule:
Ngangisebenza ngaleso sikhathi enkampanini eyayifudukela kwisoftware yamahhala ukonga izindleko zamalayisense.
Kulesi simo, intombazane ebingazi ukuthi isetshenziswa kanjani amakhompyutha ibekwe phambi kwe-PC ene-Ubuntu, i-OpenOffice, i-Evolution, iFirefox kanye ne-emulator engu-5250 ye-AS / 400
Ufunde ukusebenzisa amanothi wokubhala e-OpenOffice namaspredishithi, wathumela futhi wathola i-imeyili ne-Evolution, wasebenzisa imiyalezo esheshayo nekhasimende leJabber Spark, wasebenzisa iFirefox ngezicelo ze-intranet nokufinyelela kwi-inthanethi.
Ngelinye ilanga kwaqashwa imenenja eyamemeza izulu ngoba yayingafuni ukwenza umzamo wokusebenzisa i-OpenOffice, yize sithi lo muntu wayengeyena umsebenzisi ovelele owayezosebenzisa izici ezazingatholakali ku-OpenOffice ngaleso sikhathi, futhi wafuna ukusebenzisa MS Office.
Ukujabulisa lokhu osekushiwo ngenhla - futhi ngenxa yokuqina okufunwa ezindaweni ze-IT, uhlelo lokuthuthela kusoftware yamahhala lubuyele emuva, yize kungenjalo nge-100%: amawindi asetshenzisiwe futhi, amalayisense wokuningi Ihhovisi lezimenenja - kepha abanye baqhubeka nokusebenzisa i-openoffice - ukuthi akubanga khona ukukhushulwa komholo ngalowo nyaka kungenzeka noma kungahlangene nakho-
Into ethokozisayo ngale-anecdote ukuthi entombazaneni eyaqala ukufunda Ubuntu, kwakunzima kancane ngokusho kwayo, ukufunda iWindows XP, yize yagcina ukuyifunda.
Okungaqedwa ukuthi okuningi okwenza i-linux ibe nzima ukuthi abasebenzisi bafunde amawindi phambilini.
-ukuthi bekungekho ukwenyuselwa amaholo ngalowo nyaka okungenzeka noma kungahlangene nakho-
Kubukeka sengathi leli phutha elincane livamile kubhulogi. Lapho kuyaphinda futhi, kwakho Rubén nawo wonke umuntu: isisho sokuba khona "kukhona" sihlala sisebunyeni ngaso sonke isikhathi.
Kukhona ukukhushulwa kwamaholo; kube khona ukukhushulwa kwamaholo; kube khona ukukhushulwa kwamaholo; kuzoba khona ukukhushulwa kwamaholo; kuzoba nokunyuka kwamaholo; kube khona ukukhushulwa kwamaholo; kuzoba khona ukukhushulwa kwamaholo; ukuthi kukhona ukukhushulwa kwamaholo; ukuthi kube khona ukukhushulwa kwamaholo; ukuthi kube khona ukukhushulwa kwamaholo; ukuthi kukhona ukukhushulwa kwamaholo; njll.
Siyabonga ngesigaba sikaCarlos-Xfce, kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi imibhalo engemihle yalolu hlobo iyasibalekela
Ngabe kukhona umuntu ongangisiza ngokufaka iWine ku-LMDE, ngidlulile ngaphequlula kepha angitholi lutho oluzongisiza….
okwenzekayo ukuthi iwayini alikho endaweni yokugcina izinto yase-DEBIAN, ngiyilayishile kepha angikwazi ukuyifaka
Iya lapho unefayela khona
Ngibona iWindows njengohlelo olunemikhawulo, noma kunalokho ikukhawulele njengomsebenzisi. Futhi lokho (ngaphandle kwesidingo sokungena ezingxabanweni mayelana nezinkampani, ama-IT multinationals, isoftware yokuphathelene nabanye) sekuvele kuyisizathu esinamandla sokuyifanelekela njenge-OS engasebenzi, ngakho-ke kufanele ishiywe.
Usebenzisa iLinux, ngakolunye uhlangothi, ulwazi lomsebenzisi alunaso uphahla olubonakalayo, akukho mkhawulo enkululekweni, kuhlale kunokuthile okusha okufanele ukwazi futhi uzohlala uthola okuthile ozokuxoxa ngakho.
Uma othile ethola ukuthi i-GNU / Linux iyinkimbinkimbi, badinga ukukhulisa ukubona kwabo ngaphesheya kwe .exe.
Kuya ngokuthi, kunabantu abazothi akulula kangako ngenxa yenkinga yemidlalo, lapho lokho kungenxa yezinkampani ezingezona ze-gnu / linux.
Kuyiqiniso futhi, abathuthukisi begeyimu benza umzamo omncane kakhulu .. Angazi ukuthi kungani iqiniso liwukuthi, umdlalo ungathengiswa ngokufanayo ngeWindows njengoba kunjalo ngeLinux.
Kubadlali besikhathi eside, lokhu kuyinkinga enkulu kithi. Ngize ngishintshele kuLinux, ingxenye ebaluleke kakhulu yeqembu lami bekuyimidlalo, yize kunama-emulator amaningi we-game console ku-Linux. Kepha noma kunjalo, usheshe wafa kunokusebenzisa iwayini.
Ngokusobala angiyitholi i-LMDE, anginayo indlela yokubona i-hardware yami, angikwazi ukufaka umsindo noma amashayeli wevidiyo ... noma yini enye, angikwazanga ukubona ukwahlukanisa kwami ​​kwe-NTFS ....
Ngicabanga ukuthi ngizonamathela ku-fedora, yize ngiyithandile le distro….
Umbuzo owodwa .. Uma usebenzisa i-LiveCD ingabe konke kuyasebenza?
Sengineminyaka emi-5 ngine-Windows no-2 nge-Linux ... iqiniso ngukuthi ngifunde amakhompyutha amaningi nge-Windows kepha bekungukuthi ngigxume ngiye ku-Linux futhi ngiphume i-xD kungasho ukuthi umndeni wami wonke weqa nami, ngoba yimina ithatha amakhompyutha esihloko ayise ekhaya xD. Abafowethu nabo abebekuLinux kuleyo minyaka emibili bazi uKubuntu kangcono kunanoma iyiphi iWindows, baze bangibuze nokuthi kungani ezikhungweni zabo amakhompyutha ene-Windows hhayi i-Kubuntu, nokuthi "kulula kanjani" (ngiyasho).
Ngakho-ke ukukhululeka kwe-OS eyodwa noma enye kunikezwa yisifiso somsebenzisi nesikhathi esichithwe. Akungabazeki ukuthi uma abantu abangakaze bathinte ikhompyutha bazobona i-GNU / Linux inzima njengeWindows. (Noma kufanele ngivume ukuthi amajika okufunda awafani).
Njengoba ngingasadlali imidlalo ye-PC, iWindows ayisadingeki kimi (ngangijwayele ukuba ne-Dual Boot), futhi ngeLinux ngizoqhubeka kuze kube sekupheleni kwesikhathi ngaphandle kokuthi amandla athile angiphoqa ukuba ngenze okuphambene nalokho xD
Ngemuva kokufunda konke ukuphawula, engikuthande kakhulu ama-anecdotes, ngibona okuthile ebengikukhohliwe: ukuthi kuyacasula kanjani ukuphatha uhlelo ngeWindows. Ngempela, ukuvuselela yonke into ngephasiwedi kuyinto yokunethezeka, futhi akudingeki ukuthi uqale kabusha njalo. Ngihlale ku-XP: Angazi nakancane ukuthi iWindows 7 isebenza kanjani (funda "eziyisikhombisa" hhayi "eziyisikhombisa"). Noma kunjalo, angiphuthelwa lutho ngeWindows. Futhi, imidlalo ... angikaze ngibe ngumdlali wegeyimu. Nge-XP yami yakudala ngangidlala ne-SNES ne-Gameboy emulators; Bamangale ku-Linux, ngakho-ke angilahlekanga lutho.
Endlini yami, umndeni wami usebenzisa i-GNU / Linux. Umfowethu nomama basebenzisa iMint 11, ngisebenzisa iLinuxMint 10 kepha njengamanje ngilanda inguqulo eyishumi nambili yayo. Sinezimvu eyodwa kuphela emnyama emndenini futhi yi-Asus Laptop eneW7 kodwa ungakhathazeki izokwehla maduzane.
Hahahaha .. Uma engafuni ukuwa, thumela kimi ukuthi ngizomkhokhela ngokuletha usathane ngaphakathi hahaha
Sawubona, sengivele ngikwazile ukuthola ukuthi ibiyini inkinga ngokuhlukanisa, bengikhohliwe ukuthi kumafasitela ngisebenzise i-BitLocker ngakho-ke angikwazi ukuyifaka, ngangena emafasiteleni ngayisusa….
manje ngidinga usizo ngokuthile okuzongivumela ukuthi ngibone i-hardware ye-pc yami bese ngifaka abashayeli.
Ukubona ukwakhiwa nge do uname -a uyakutshela
Ngokuqondene nokunye okunye angazi, kepha uma unemidwebo ye-Intel ngeke ube nezinkinga
Uyabona, kuhlale kungamaWindows ukusola i-LOL !!!!
Uma usebenzisa iGnome, zama i-HardInfo 😉
I-Wbar-config: Ithuluzi lokwenza ngokwezifiso nokulungisa i-Wbar
Sebenzisa ummeleli ku-Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce nokufanayo